I-Orthorexia, i-Healthy Eating Disorder Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa uthetha ngokubaluleka kokutya kobomi obusempilweni, isiphawuli sihlala sihamba negama lokutya: elungeleleneyo. Yindlela yokuqinisa ukubaluleka kokulinganisela kuyo yonke into, kubandakanya imikhwa yokutya. Nokuba ukuthanda izinto ngokuziphatha kakuhle kunokubangela ingozi enkulu empilweni. Kwimeko yokondla, inokubangela isifo esibizwa ngokuba yi-orthorexia.
Ngokungafaniyo nezinye iingxaki zokutya ezifana ne-bulimia kunye ne-anorexia, kwimeko ye-orthorexia, inkxalabo enkulu ayisiyiyo le iboniswa sisibuko, oko kukuthi, uhlobo lomzimba. Inxulumene kakhulu nenkxalabo yokusebenzisa kuphela oko kuthathwa njengokucocekileyo nokuchanekileyo.
1 Yintoni iOrthorexia?
2 Iimpawu Orthorexia
3 Yintoni umngcipheko we-orthorexia?
5 I-Orthorexia kunye neVigorexia
Ligama elenziwe ngugqirha waseMelika uSteven Bratman, ngo-1997, nelichaza indlela yokuziphatha kokulandela ukutya okungqongqo ngokugqithisileyo okuqulathe kuphela ukutya okusempilweni.
I-Orthorexia nervosa yingxaki yokutya ebonakaliswa kukuthanda ukutya ukutya okusempilweni kuphela. Umntu onetyhefu ufuna ukutya okugqibeleleyo.
Eli gama lithathwe kumagama esiGrike orexsis "iphango" kunye neorthos "echanekileyo."
Unobangela ophambili we-orthorexia kukukhangela umzimba ogqibeleleyo kunye nemigangatho yobuhle ebekwe luluntu. Kwakhona, umntu ukholelwa ukuba ngale ndlela yokutya umntu uya kuba sempilweni kwaye akhusele izifo.
Iimpawu zokuqala ze-orthorexia zibandakanya ukusukela rhoqo ukutya okusempilweni kunye nenkxalabo kukhetho lokutya.
Ke ngoko, kuqhelekile ukuba umntu achithe ixesha elininzi ephanda, efunda iilebheli zokutya, kwaye ekhetha ukutya.
Iimpawu eziphambili ze-orthorexia zezi:
Ukwala ukutya ukutya okuneemveliso;
Ukugxila kakhulu ekulandeleni ukutya okunesondlo;
Inkxalabo malunga nemvelaphi kunye nokulungiswa kokutya;
Hlala kude nonxibelelwano lwasentlalweni;
Kuphephe ukutya ngaphandle kwekhaya;
Ukukhutshwa kwezinye iintlobo zokutya ekudleni: inyama, iswekile kunye namafutha;
Ukuziva unetyala kwaye ulusizi xa usitya nakuphi na ukutya ngaphandle kokutya;
Inkxalabo malunga nolwazi lwesondlo lokutya.
Ukongeza, i-orthorexia inokukhokelela ekunciphiseni ukubanakho ukugxila, i-anemia, ukunciphisa umzimba, kunye nokuzihlukanisa nabantu.
Yintoni umngcipheko we-orthorexia?
Lo mkhwa uthathwa njengesifo xa ukutya kuqala ukuthintela kakhulu, ngaphandle kwezakha mzimba ezibalulekileyo. Ukongeza, ukuhlalisana kuyachaphazeleka, kuba umntu uyayeka ukuya kwiintlanganiso ezibandakanya ukutya, kuba bayala ukutya ngaphandle kwendlu.
Enye into exhalabisayo yenzeka xa i-orthorexic ihendelwa ukuba itye into engaphilanga, umzekelo, iilekese. Le meko iqhelekile kuye nabani na, kodwa ivelisa iimvakalelo zokuziva unetyala kwesi sigulana, esinokubangela ezinye iingxaki, ezinje ngoxinzelelo, unxunguphalo noxinzelelo.
Kuqhelekile ukuba i-orthorexia ifunyanwe sele ikumanqanaba aphezulu kuba kunzima ukuyichonga ngokwasemzimbeni kwaye, ngokomgaqo, inxulumene kuphela nemikhwa esempilweni. Ukufumanisa isifo, kubalulekile ukuba izalamane nabantu abasondeleyo bayazi ngokuziphatha okunobungozi.
Unyango kufuneka lube ngamacandelo ahlukeneyo, kubandakanya isondlo kwaye, ngakumbi ugqirha wezengqondo, onokuchonga izinto ezibangele esi sifo kunye nokunceda ukusilawula. Unyango lwe-orthorexia kufuneka lwenziwe ngoochwephesha bezempilo. Ukuhambelana noogqirha, izondlo kunye noochwephesha bezengqondo kubalulekile.
Abantu abane-orthorexia kufuneka baqonde ukuba ukutya okunempilo kukudibana kwezempilo. Nangona kunjalo, ukuzixakekisa kakhulu ngokutya kunye nokukhutshelwa ngaphandle kwezakha mzimba ekutyeni kunokuba yingozi kwaye kube neziphumo ezibi empilweni.
I-Orthorexia kunye neVigorexia
I-Orthorexia kunye ne-vigorexia ziindidi ezimbini zeengxaki zokutya. Nangona kunjalo, ngelixa i-orthorexia kukho ukuzixakekisa okugqithisileyo ngokutya, kwi-vigorexia i-obsession yeyomzimba ocekeceke kwaye onezihlunu.
Umntu one-vigorexia unombono ogqwethekileyo ngenkangeleko yakhe. Ucinga ukuba ebhityile kakhulu, nangona enezihlunu.
Ke ngoko, bamkela isiqhelo somthambo womzimba onamandla kunye nokutya okunotye kakhulu kwiiprotein.